Dad Salaad Tukanayay oo Masjid Lagu Dhax Dilay iyo Weerar Lagu Qaaday Melleteriga Dowladda Al-Jazaa'ir.
Wednesday May 03, 2017 - 10:33:38 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay Ururka Al Qaacidada Maqribul Islaam ayaa lagu sheegay in weerar khasaara xooggan lagu gaarsiiyay cadawga ay ku qaadeen ciidamo katirsan melleeteriga dowladda dabadhilifka Al Jazaa'ir.
Wararka ka imaanaya gobolka Tebsah ee dhaca Bariga Al Jazaa’ir ayaa sheegaya in qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari nuuca dagaalka ah oo ay wateen ciidamada melleteriga.
Bayaan kooban oo Al Qaacidda ee Maqribul Islaami ay ku faafisay baraha internetka ayay ku sheegtay in gaari cadowgu leeyahay ay ku beegsadeen deegaanka Farkaan ee wilaayadka Tebsah islamarkaana gaarigu uu burburay waxaana dhintay dhammaan ciidamadii la socday gaariga ay wateen melleteriga xukuumadda ashahaadda ladirirka Al Jazaa’ir.
Mujaahidiintu waxay sheegeen in weerarkan uu jawaab celin u ahaa howlgal dhagar ah oo sedax maalin ka hor ka dhacay wadankaasi waxaana ku shahiiday rag katirsanaa alqaacidada Maqribul Islaami.
Katiibada Alfatxul Mubiin oo katirsan ciidamada Alqaacidda ayaa howlgalkan fulisay sida lagu sheegay bayaanka lagu faafiyay baraha internetka.
Dhinaca kale ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay tobaneeya kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii weerar lagu qaaday masjid kuyaala bariga wadanka aljazaa’ir.
saraakiil ayaa sheegay in ruux aan heybtiisa lagaran uu quraarado basiin lagasoo buuxiyay uu ku weeraray masjidka waxaana gubtay qeyb ka mid ah dhismaha Masjid Jaamaca Cumar Bin Khadaab.
2 qof oo uu kamid yahay imaamkii masjidka ayaa dhintay 30 kalane dhaawacyo halis ah ayaa soo gaaray, mas’uul u hadlay xukuumadda dabadhilifka Al Jazaa’ir ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan heybta ruuxa weerarka geystay.
Weerarka ayaa dhacay xilli boqolaal qof ay salaad ku tukanayaan gudaha Masjidka, bilihii lasoo dhaafay waxaa wadankaas kusoo badanayay cadaadiska ka dhanka ah goobaha cibaadada.
Wasaaradda waxbarashada ayaa soo rogtay amar ay ku mamnuucayso xirashada qamiiska iyo dhammaan labiska salafka oo ay sheegeen in uu halis ku yahay amniga taasi bedelkeedna waxay wasaaraddu boorisay xirashada dharka ay soo saaraan wadamada reer galbeedka.